Tantaran'ny Repoblikan'i Kôngô - Wikipedia
Ny tantaran' ny Repoblikan' i Kôngô dia tsy mifankaiza amin' ny tantaran' ireo fireneneana afrikana manodidina azy: fisian' ny fanjakana maro madinidinika, fahatongavan' ny Eorôpeana, fivarotana andevo, fanjanahan-tany (frantsay ny an' ny Repoblikan' i Kôngô), fahaleovan-tena, ady an-trano, fitsabahan' ny firenena mpifanolo-bodirindrina, ary fizorana mankany amin' ny demôkrasia.
Ny Pigmea Mboty no mponina voalohany tao amin' ny faritra misy ny Repoblikan'i Kôngô ankehitriny. Niorim-ponenana tao koa tamin’ ny fiandohan’ ny fanisan-taona iraisana ny Banto. Ireo fanjaka-mpanjaka roa lehibe dia ny fanjakan’ i Lôangô sy fanjakan’ i Kôngô. Ny fanjakan’ i Lôangô dia fanjakana miankina amin' ny fanjakan’ i Kôngô.
Ilay Frantsay atao hoe Pierre Savorgnan de Brazza dia nijery manontolo ny tany misy an’ i Kôngô ankehitriny tamin’ ny taona 1879 hatramin’ ny 1880. Nanao sonia fifanarahana tamin’ ny mpanjaka izy, ka nametraka an’ izany tany izany ho eo ambany fiarovan’ ny Frantsay. Tamin’ ny taona 1903 dia nomena ny anarana hoe Moyen-Congo ilay faritra ary lasa zanatany frantsay. Nanomboka tamin’ ny taona 1944 dia namory ny solontenan’ ny tanin’ ny Empire colonial français ny i Charles de Gaulle ka namolavola ny fototry ny Union française.
Taorian’ ny fanaovana fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ ny taona 1958 dia nahazo ny fahaleovan-tenany i Moyen-Congo tamin’ ny 15 Aogositra 1960 ka niova anarana hoe Repoblikan’ i Kôngô. Ny filoham-pirenena voalohany dia i Fulbert Youlou. Nifanesy ny fanonganam-panjakana. Ireto ny nifandimby voalohany teo amin’ ny fitondrana: Alphonse Massemba-Débat, ny kapiteny Raoul, Marien Ngouabi, Yhombi-Opango, Sassou-Nguesso. Nanajaka ny ady an-trano izay nahafaty olona an-ketsiny maro hatramin’ ny taona 1993 ka hatramin’ ny 1999. Nisy ny fanovana lalàm-panorenana izay nolanina tamin’ny fitsapan-kevibahoaka tamin’ny taona 2002 ary lany tamin’ ny fifidianana filoham-pirenena i Denis Sassou-Nguesso tamin’ io taona io ihany. Ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fitsapan-kevi-bahoaka natao dia dingana lehibe vita amin’ ny fampandriam-pahalemana.
1 Talohan’ ny fanjanahan-tany
1.1 Ny fiorenam-ponenan’ ny mponina voalohany
1.2 Vanimpotona faha-mpanjaka
2 Ny fanjanahan-tany frantsay
3 Fahazoana ny fahaleovan-tena
3.1 Fizorana mankany amin'ny fahaleovan-tena
3.1.1 Fivoriana notarihin' ny jeneraly De Gaulle
3.2 Ireo filoham-pirenena dimy voalohany
3.2.1 Fulbert Youlou
3.2.2 Alphonse Massamba-Debat
3.2.3 Ny kapiteny Raoul
3.2.4 Marien Ngouabi
3.3 Fahazoan' i Sassou-Nguesso ny fitondrana
3.3.1 Filoham-pirenena i Sassou-Nguesso tamin'ny taona 1979
3.3.2 Voafidy indray i Sassou-Nguesso tamin’ ny taona 1984
3.4 Firenena nanjakan' ny ady an-trano
3.4.1 I Pascal Lissouba no voafidy tamin’ ny taona 1992
3.4.2 Ady an-trano tamin’ ny taona 1993 hatramin’ ny 1994
3.4.3 Ady an-trano tamin’ ny taona 1997
3.4.4 Nanambara tena ho filoham-pirenena i Sassou-Nguesso
3.4.5 Ady an-trano tamin’ ny taona 1999
4 Fifandaminana mankany amin’ ny fandriam-pahalemana
4.1 Fanelanelanana nataon' i Omar Bongo
4.2 Fifidianana filoham-pirenena
4.2.1 Vofidy ho filoham-pirenena i Sassou-Nguesso
4.2.2 Voafidy indray ho filoham-pirenena i Sassou-Nguesso
Talohan’ ny fanjanahan-tanyHanova
Ny fiorenam-ponenan’ ny mponina voalohanyHanova
Nahitana sisan-javatra nataon’ olombelona tamin’ ny vanimpotoana paleôlitika akaiky tokony ho tany amin’ ny 7 000 taona tal. J.K. tao amin' ny faritra misy ny Repoblikan' i Kôngô ankehitriny. Taty aoriana dia nisy mponina izay efa andalam-piorenam-ponenana fa tsy mifindrafindra monina intsony, nefa tsy misy fatatra ny momba azy afa-tsy izy efa mahay manao taozavara amin’ ny metaly.
Tokony ho taty aoriana kokoa no nahatongavan’ ny Pigmea. Niorim-ponenana tao koa tamin’ ny fiandohan’ ny fanisan-taona iraisana ny Banto izay avy amin’ ny faritra maro samihafa, ka niteraka ireo foko samy manana ny kolontsainy ao amin’ io faritra io toy ny Kôta (Kota), ny Bateke (Batéké), ny Bakôngô (Bakongo) ary ny Mbôsy (Mbochi). Ny Maka (Maka) no tonga farany, izay tsy nahatratra ny faritra avaratra (faritr’ i Ouesso) raha tsy tamin’ ny taonjato faha-20.
Fanjakan’ i Kôngô
Rehefa tonga teo amin’ ny vinanin’ ny ony Congo tamin’ ny taona 1482 ilay mpiondrana an-tsambo pôrtogey atao hoe Diogo Cão dia nahita ireo fanjaka-mpanjaka roa lehibe, dia ny fanjakan’ i Lôangô (Loango) sy fanjakan’ i Kôngô (Kongo). Ny fanjakan’ i Lôangô, izay nandrakotra ny faritra avaratra sy atsinanan’ i Congo, dia fanjakana miankina amin' ny fanjakan’ i Kôngô izay nifehy ny tany rehetra akaikin’ ny vinanin’ ny ony hatrany amin’ ny renirano Cuanza ao atsimo.
Rehefa afaka antsasa-taonjato nanjakan’ ny fifandraisana manaja ny fitoviana teo amin’ i Lisbonne sy i Mbanza-Kongo, renivohitry ny fanjakana, dia velona ny disadisa tao amin’ ireo faritany vokatry ny tsindry nataon’ ireo Pôrtogey nandao ny fireneny ka niorim-ponenana tao São Tomé, sy ny fitomboan’ ny fivarotana olo-mainty, ka niafara tamin’ ny faharavan’ ilay fanjakan’ i Kôngô sy ny fihalemen’ ny fanjakan’ i Lôangô.
Ny faharavan’ ny fanjaka-mpanjaka, ny fivarotana andevo, ny ady mitam-pidiana ary ny asan’ireo misionera katôlika dia nanakorontana ny fiainan’ ny mponina izay lasa nanaraka ny fihetsiketsehana mesianika maro mpanafangaro finoana. Ny tena miavaka amin’ izy ireo dia ny Antôniana notarihin’ i Kimpa Vita (izay nahazo ny anarana hoe Dona Beatrice). I Kimpa Vita dia mpisorom-bavy izay inoan’ ny mpanaraka azy fa nahita an’ i Antoine de Padoue tamin’ ny fahitana. Izy no hamerina indray ny fanjakana, nefa nosamborin’ ny misionera kaposina izy ka nodoran’ ny Inkizisiôna velona tamin’ ny taona 1706.
Ny fanjanahan-tany frantsayHanova
Ilay Frantsay atao hoe Pierre Savorgnan de Brazza dia nijery manontolo ny tany misy an’ i Kôngô ankehitriny tamin’ ny taona 1879 hatramin’ ny 1880 sy nialoha lalana an’ i Stanley tao amin’ io faritra io. Nanao sonia fifanarahana tamin’ ny mpanjaka (atao hoe makoko) izay sady andriamajaka no loham-pivavahan’ ny Bateke (Batéké) izy, ka nametraka an’ izany tany izany ho eo ambany fiarovan’ ny Frantsay (prôtektôrata frantsay). Fotoana fohy taty aoriana dia nanao sonia fifanarahana tamin’ ny lietinà Cordier koa ny mpanjakan’ i Lôangô (ma-Loango). Ny faritry ny tany dia nifanarahana niaraka tamin’ ireo firenena eorôpeana hafa tamin’ ny kôngresy natao tany Berlin (Alemaina) tamin’ ny taona 1885, izay nanapahana ny hoavin’ i Afrika. Tamin’ ny taona 1903 dia nomena ny anarana hoe Moyen-Congo ilay faritra ary lasa zanatany nakambana tao amin’ i Afrique-Équatoriale Française (A-EF) tamin’ ny taona 1910.
Ny fanjanahan-tany frantsay dia niavaka tamin’ ny taona 1885 noho ny fanorenana kômpania mpampiasa tany izay nanana velaran-tany midadasika dia midadasika sy nitrandraka ny harena voajanahary nefa tsy nanomana ny hoavy ara-toekarena sy ara-piarahamonin’ ny vahoaky ny tany notrandrahiny. Ny asa an-tery vozona sy ny filanjana entana ho an’ ny fanjakana, ny fomba fampiasana izay tsy mendrika ny maha olombelona dia nandripaka ny mponina (angamba 300 000 ny isan’ ny maty tamin’ ny taona 1890 hatramin’ ny 1910).
Marc Allégret sy André Gide tamin’ ny taona 1920.
Maro ireo zava-nitranga manafintohina, isan’ izany ny olona maty noho ny fanamboarana ny lalam-by Congo-Océan (mampitohy an’ i Brazzaville sy i Pointe-Noire) izay niteraka fanoherana mivaivay (ohatra: ny fanoherana nataon’ ilay mpanoratra André Gide tao amin’ ny boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe Voyage au Congo sy ny sary sy feo nalain’ i Albert Londres) izay nanery ny manam-pahefana frantsay hisitona tamin’ ny ankamaroan’ ny kômpania ny fahazoan-dalana hitrandraka.
Tahaka ny tamin’ ny fanjakan’ ny Pôrtogey ny fihetsiky ny mponina izay nanaraka ireo fihetsiketsehana ara-pivavahana sy ara-pôlitika mampifangaro finoana. Isan’ ireo fihetsiketsehana ireo ny kakisma sy ny kimbangisma izay teraka nanomboka tamin’ ireo taona 1920 mba hanoherana ny fanararaotana tamin’ ny vanimpotoan’ ny fanjanahan-tany.
Fahazoana ny fahaleovan-tenaHanova
Fizorana mankany amin'ny fahaleovan-tenaHanova
Fivoriana notarihin' ny jeneraly De GaulleHanova
Nandritra ny Ady Lehibe faharoa, i Brazzaville, izay tanàna lehibe indrindra tamin’ ny fanjanahan-tany, renivohitry ny Afrique-Équatoriale Française (A-ÉF), dia lasa renivohitr’ i France libre (“Frantsa Afaka”). Nanomboka tamin’ ny taona 1944 dia namory ireo solontenan’ ny tanin’ ny Empira mpanjana-tany frantsay (Empire colonial français) ny jeneraly De Gaulle ka namolavola ny fototry ny Firaisambe frantsay (Union française). Tao amin’ io tanàna io ihany no naovany kabary tamin’ ny taona 1946 sy 1958 nanambaràna ny fampitsaharana ny fanjanahan-tany. Lasa tanàna manan-tantara lehibe i Brazzaville ho an’ i Afrika mahaleo tena.
Taorian’ ny fitsapan-kevibahoaka izay natao tamin’ ny 28 Septambra 1958 dia nahazo ny fahaleovan-tenany i Moyen-Congo tamin’ ny 15 Aogositra 1960 ka niova anarana hoe Repoblikan’ i Kôngô (République du Congo).
Ireo filoham-pirenena dimy voalohanyHanova
Fulbert Youlou tamin'ny taona 1963
Ny filoham-pirenena voalohany dia ilay abe Fulbert Youlou, izay voaongana telo taona taty aoriana nandritra ny fikomian’ ny vahoaka tamin’ ny volana Aogositra 1963, izay nahatafakatra teo amin’ ny fitondrana an’ i Alphonse Massamba-Débat, fiohan’ ny Antenimieram-pirenena taloha.
Alphonse Massamba-Debat tamin'ny taona 1968
Ny fahasahiranana ara-toekarena sy ny toe-draharaha ara-pôlitika tao amin’ ny faritr’ i Afrika misy ny Repoblikan’ i Kôngô, isan’ izany ny adin’ i Kôngô-Kinshasa, dia nanamafy ny tsy fahamarin-toerana ara-pôlitika. Nanatona an’ i Sina kômonista ny Repoblikan’i Kôngô notarihin’ i Alphonse Massamba-Débat.
Ny kapiteny RaoulHanova
Tamin’ ny taona 1968, i Alphonse Massamba-Débat dia naongan’ ny kapiteny Raoul.
Marien Ngouabi tamin' ny taona 1972.
Naongan’ ny kômanda Marien Ngouabi, izay nandraikitra ny safidin’ i Kôngô ho amin’ ny marksisma, i Raoul tamin’ ny volana Janoary 1969. Tamin’ ny volana Janoary 1970 dia niova anarana ho Repoblika Entim-Bahoakan' i Kôngô (République populaire du Congo) ilay firenena.
Nisy namono i Marien Ngouabi tamin’ ny 18 Marsa 1977 ka nisolo azy ny kôlônely Joachim Yhombi-Opango. Nisy ny fifandraisana ara-pôlitika sy ara-toekarena matotra tamin’ i Frantsa sy i Kôngô. Tsy nanova ny anaran’ ny renivohiny ho amin’ ny anarana afrikana i Kôngô, tsy tahaka ireo firenena afrikana maro.
Fahazoan' i Sassou-Nguesso ny fitondranaHanova
Filoham-pirenena i Sassou-Nguesso tamin'ny taona 1979Hanova
Denis Sassou Nguesso tamin' ny taona 2014
Tamin’ny taona 1979 dia nandimby an’ i Yhombi-Opango ny kôlônely Denis Sassou-Nguesso ka nanao sonia fifanaraham-piaraha-miasa sy fisakaizana tamin’ ny Firaisana Sôvietika tamin’ ny taona 1981.
Voafidy indray i Sassou-Nguesso tamin’ ny taona 1984Hanova
Voafidy indray ho filohan’ ny Repoblika tamin’ ny taona 1984 i Denis Sassou-Nguesso, ary tamin’ ny taona 1989 dia nitombo ny fanoherana azy, izay nasesiky ny fitontongan’ ny toekarena (fihenam-bidin’ ny solitany sy fiavoan’ ny trosa).
Taorian’ ny fanaovana fihaonambem-pirenena tamin’ ny taona 1991 dia lany ny lalàm-panorenana izay nanafoana ny fanarahana ny sori-dalana marksista sy nametraka ny demôkrasia manaiky ny fisian’ ny antoko pôlitika maro.
Firenena nanjakan' ny ady an-tranoHanova
I Pascal Lissouba no voafidy tamin’ ny taona 1992Hanova
Lany ho filoham-pirenena tamin’ ny fifidianana natao tamin’ ny volana Aogositra 1992 tamin’ ny 61,32 %n’ ny vato i Pascal Lissouba. Taorian’ ny fahalaniany dia nampangain’ i Denis Sassou-Nguesso ho mpanavakavaka faritra sy mpanao didy jadona i Pascal Lissouba. Velona indray ny disadisa ara-pôlitika teo amin’ ny firenena ka noravana ny Antenimiera tamin’ ny taona 1992 ary nosoloana ny jeneraly Yhombi-Opango ny piraiminisitra Claude-Antoine Da Costa
Ady an-trano tamin’ ny taona 1993 hatramin’ ny 1994Hanova
Nanomboka tamin’ ny volana Jolay 1993 hatramin’ ny taona 1994 dia lasa sehatra itrangan’ ny ady an-trano i Brazzaville. Nifanandrina tamin’ izany ny mpomba ny filoha Lissouba sy ny mpomba ny filoha taloha Sassou-Nguesso ary ny mpomba an’ i Bernard Kolélas mpitarika ny antoko mpanohitra lehibe indrindra sady ben’ ny tanànan’ i Brazzaville. Nahafatesana olona 2 000 any ho any izany ady izany sady nahatonga ny olona miisa 100 000 any ho any hifindra monina tao amin’ ny tanin’ ny Repoblikan’ i Kôngô ihany. Izany ady izany dia tsy nitsahatra raha tsy tafiditra ho mpikambana ao amin’ ny governemanta ny mpikambana ao amin’ ny mpanohitra tamin’ ny taona 1995. Tsy afaka nisakana ny asan’ ireo milisy mitam-piadiana anefa ny fitondram-panjakana, dia ireo milisy nandray ireo tanora kôngôley tsy an’ asa sy nahazo fiofanana miaramila.
Ady an-trano tamin’ ny taona 1997Hanova
Nahazo aina indray ny ady an-trano tamin’ ny volana Jona 1997 nefa ny fifidianana filoham-pirenena dia tokony hatao amin’ ny volana Jolay 1997. Tamin’ ny 5 Jona 1997 dia ny tafika notohanan’ ny “Zoulou” (anaran’ ny milisin’ ny filoham-pirenena manokana) dia nanao fahirano ny trano fonenan’ i Sassou-Nguesso. I Sassou-Nguesso kosa namaly tamin’ ny alalan’ ny milisiny manokana atao hoe “Cobra”. Nandritra ny efa-bolana dia fifanadrinana mahery vaika no hita tao Brazzaville, izay nandrava sy nanafoana ny mponina tao. Tsy nisy nahazo fandresena ireto mpifanandrina ka nitady fanampiana avy any ivelany.
José Eduardo dos Santos tamin' ny taona 2014
I Lissouba, izay ho lasa naman’ i Kolélas tsy ho ela, dia nanafatra mpanamory angindimby Mi-24 avy ao amin’ ireo firenen’ ny Faritra atsinanan’izao tontolo izao taloha.I Sassou-Nguesso kosa niantso ny tafik’ i Dos Santos filohan’ i Angôla izay akaiky azy hatrizay amin’ ny lafiny ara-pôlitika. Niditra an-tsehatra izany tafika izany sady nanararaotra hamely koa ny mpifanandrina aminy, izay naman’ ny Kôngôlein’ i Kinshasa (Repoblika Demôkratikan'i Kôngô) hatry ny ela.
Nanambara tena ho filoham-pirenena i Sassou-NguessoHanova
Tamin’ ny 16 Ôktôbra 1997 dia nanambara ny fifaranan’ ny ady i Sassou-Nguesso, izay nivoaka ho mpandresy, sady nitaona ny Kôngôley ho amin’ ny fampihavanam-pirenena, ka tamin’ ny 25 Oktobra 1997 dia nanambara tena ho filoham-pirenena taorian’ ny nananganany ny governemantan’ ny firaisam-pirenena. Izany governemanta izany dia natao hamaritra ny faharetana sy fomba hitondrana ny tetezamita mialoha ny fanaovana fifidianana samihafa.
Ady an-trano tamin’ ny taona 1999Hanova
Tamin’ ny taona 1999 dia nanomboka indray ny fifamelezana teo amin’ ny tafika sy ny “Ninjas” notarihin’ i Bernard Kolélas tao amin’ ny Repoblikan' i Kôngô izay reraka noho ny ady an-trano (nahafaty olona 100 000 any ho any) izay namela takaitra sarotra hadinoina sady niteraka fisaraham-bazana: ny faritra avaratra dia nanakaiky an’ i Sassou-Nguesso, ny faritra afovoany andrefana niaraka tamin’ i Lissouba, ary ny faritra manodidina an’ i Brazzaville dia tamin’ i Kolélas. Lasa faritra ajakan’ ny tsy fandriam-pahalemana noho ny afitsioky ny milisy tsy mandray karama ny Repoblikan’ i Kôngô. Etsy an-daniny, noho ny fitadiavany vonjy tamin’ i Angôla dia tafiditra tao amin’ ny disadisa lehibe tao amin’ ny faritry ny Farihy Lehibe ny Repoblikan’ i Kôngô.
Fifandaminana mankany amin’ ny fandriam-pahalemanaHanova
Fanelanelanana nataon' i Omar BongoHanova
Omar Bongo tamin' ny taona 2004
Tamin’ ny volana Desambra 1999 dia nisy ny fifanarahana hampitsahatra ny ady izay nosoniavina tamin’ ny alalan’ ny fanelanelanana nataon’ i Omar Bongo. Ny fanelanelanana nataon’ ny filoham-pirenena gabôney dia niafara tamin’ ny fisian’ ny fihaonambe tamin’ ny volana Marsa sy Avrily 2001 tao Brazzaville, izay fotona namaranana ny fifampiresahana amin’ ny samy kôngôley, izay nanomanana ny firosoana amin’ ny fampihavanam-pirenena.
Vofidy ho filoham-pirenena i Sassou-NguessoHanova
Lany tamin’ ny fitsapan-kevi-bahoaka natao tamin’ ny volana Janoary 2002 tamin’ ny 84,6 %n’ ny vato ny lalàm-panorenana novolavolaina nandritra izany fihaonambe izany, izay nanome fahefana lehibe sy matanjaka ny filoham-pirenena. Roa volana taorian’ izay dia lany tamin’ ny 89,41 %n’ ny vato i Denis Sassou-Nguesso, raha niala tsy nandray anjara tamin’ ny fifaninanana ny mpanohitra azy. Na dia nitsikera fatratra ny tsy fisian’ ny mangarahara sy ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana ny mpanohitra, ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fitsapan-kevi-bahoaka natao dia efa dingana lehibe vita amin’ ny fampandriam-pahalemana ny firenena izay ravan’ ny ady an-trano telo nifanesy izay nampahatra faraidiny ny ankamaroan’ ny vahoaka tao amin’ny Repoblikan’ i Kôngô.
Voafidy indray ho filoham-pirenena i Sassou-NguessoHanova
Tamin’ny taona 2002 dia lany ny lalàm-panorenana vaovao izay nanafoana ny toeran’ny piraiminisitra, ka nanamafy ny fahefan’ny filoham-pirenena izany. Fidina hitondra mandritra ny fito taona azo havaozina indraimandeha ny filoham-pirenena. Tamin’io taona io ihany dia nisy ny fifidianana filohan’ny Repoblika izay nahatafaverina an’i Denis Sassou-Nguesso tamin’ny toerany indray. Niverina ny filaminana tamin’ ny fito taona nitondran’ i Sassou-Nguesso.
Tamin’ ny 12 Jolay 2009 dia natao indray ny fifidianana ka lany ho filohan’ ny Repoblika indray i Sassou-Nguesso izay nahazo vato 78,61 %. Tamin’ ny 25 Oktobra 2015 dia novana tamin’ ny alalan’ ny fitapan-kevi-bahoaka indray ny lalàm-panorenana. Tamin’ ny faran’ ny volana Desambra 2019 dia voatendrin’ ny antokony hilatsaka filoham-pirenena amin’ ny taona 2021 indray i Denis Sassou-Nguesso.
Tantaran'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27ny_Repoblikan%27i_Kôngô&oldid=1043260"
Dernière modification le 24 Janoary 2022, à 18:19
Voaova farany tamin'ny 24 Janoary 2022 amin'ny 18:19 ity pejy ity.